Xildhibaan Mahad Salaad oo ka digay iney fashilanto dib-u-hishiisiintii looga dhawaaqay Garoowe – Kalfadhi
Xildhibaan Mahad Salaad oo ka digay iney fashilanto dib-u-hishiisiintii looga dhawaaqay Garoowe
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa, isaga oo ka qeybgalayey xalay dhacdo soodhaweyn loogu muujinayey hogaanka cusub ee Dowlad Goboleedka Puntland oo ka dhacay Neyroobi-Kenya, waxa uu ku baaqay in laga dhabeeyo dib-u-hishiisiintii looga dhawaaqay Garoowe 26-kii ilaa 27-kii bishii hore. “Waan rajeeneynaa inuu cafiskaas (uu ka soojeediyey Garoowe Islaan Ciise Islaan Maxamed) meel maro, oo dib-u-hishiisiin rasmiya ay ka dhalato, horayna loo socdo” ayuu yiri Xildhibaan Mahad Salaad.
Waxa uu ka digay in dib-u-hishiisiinta habeenkaas lagu dhawaaqay Caleema-saarkii Madaxweynaha Puntland iyo Kuxigeenkiisa, dadkii joogay goobtaasna ay wada aqbaleen, ay fashilanto. Isaga oo kaftan ku dhex qarinaya farriintaas ayuu yiri “Dib-u-hishiisiin iyo ha la’is cafiyo haddii la yiraa, fadhiga in la beddeshaa la rabaa”, taas oo mid ka mid ah siyabaha loo qaadan karo ay tahay inuu ula jeeday in la rabo in ay Dowladda Madaxweyne Farmaajo isbeddel dhab ah sameyso.
Isaga oo wajahaya hadaljeedintiisa munaasabadda lagu casuumay ayuu Xildhibaanku sheegay in ay muhiim tahay in lala shaqeeyo hogaanka Puntland ee bishii hore lagu doortay Garoowe. Isla sidaas oo kale ayuuna u sheegay in ay Soomaalida oo dhan ku tahay waajib in ay la shaqeeyaan madaxdooda, si deegaanka iyo dadkiisa ay u gaarsiiyaan halka lala rabo.
Waxa aad u bogaadiyey inuu Madaxweynaha Puntland, Saciid Cabdullaahi Deni, isugu keenay goob qura, 26-kii Janaayo, 2019, “dad ay suurtagal ahayd” buu yiri “in iyagoo deris ahaa aysan arkin jirin” oo sida uu sheegay ku kala erdhoobay siyaasadda, taas oo uu ku tilmaamay in ay ahayd fursad uu Deni abuuray. Isaga oo tilmaamay sababta ay Puntland sidaas ugu suurtagashay ayuu yiri “is-caburin idinkuma dhex jirto. Illaahey mahaddii waxaa ah AMISOM idiinma joogto, oo dadka hala soo qabqabto lama dhahaayo”.
Xasan Sheekh Maxamuud: Anaga Qaran Dumis ma nihin!